Baandaan Eenyu?opdon kaleessaa,odpn dheengaddaa;ppn har’aa - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBaandaan Eenyu?opdon kaleessaa,odpn dheengaddaa;ppn har’aa
Baandaan Eenyu?opdon kaleessaa,odpn dheengaddaa;ppn har’aa
OPDOn kaleessaa, ODPn dheengaddaa. PPn har’aa seexaa ittiin baandaa namaan jettu hin qabdu. Baandaan kan dantaa sabaa faayidaa xixxiqqoof dabarsee kenne. Baandaan gantuu dha. Baandaan iccitii sabaa kan diinaaf dabarsee kenne. Baandaan yeroo biyyi rakkoo keessa jiru, kan diinaaf hojjatu. Baandaan diina waliin hariiroo tolfatee kan biyya miidhu. Hojii kan immoo hojjachaa kan ture, amma illee kan itti jiru, OPDO/ODP/PP dha.
Baandaan Gantuu dha. Kaleessa kan Oromoo ganee, Wayyaaneef ergamaa ture OPDO dha. Wayyaaneen akka qe’ee Oromoo keessa bashaatee jiraattu kan gargaaraa ture OPDO dha. Seenaan sun seenaa fagoo miti. Namuu kan hoo’aatti ayadatuu dha. Har’as Oromiyaa keessatti kan Oromoo ganee, gartuu Amaaraaf lukkee ta’ee Oromoo ajjeechisaa jiru, PP dha. PP keessa kan guutan marti faayidaa dhuunfaa kanneen qabsoo oromoo gananii dha. Kanaaf, baandaan isaanuma, warra Oromoo gananii diinaaf ergamaa jiranii dha. Baandaa jechuun gantuu dha; lukkee diinaa ti; ergamtuu dha.
Baandaan waan badaan malee waan gaariin hin fakkeefafmtu. Oromiyaa keessatti kan maqaa abdaa qabu, kan baandumaman beekamtu, OPDO dha. Har’as PPn maqaadhuma badaa kana dhaaltee, gochaanis itti jirti. PPn akka baandaatti waan amam itti jirtus walyaadachiisuun ni danda’ama. PPn Seenaa Calanqoo fi Aanolee haaltee, seenaa minilik kuulaa fi kukkulaa jirti. PPn Itoophiyaa dullattii deebistee haaromsaa jirti. PPn Oromiyaa balleessuuf halkaniif guyyaa wirxifachaa jirti. PPn sabboontota Oromoo hidhaa fi ajjeesaa jirti. PPn qe’ee Oromoo gabrummaa lammaffaatti galchuuf waan dandeessu mara gochaa jirti. PPnis akkuma OPDO kaleessatti gurmuu baandotaan gaggeefafmaa jirti. Kanaaf, akkuma OPDO kaleessatti Oromiyaa keessatti gaaddisa ishii baqachaa oolti. PPn baandummaa mataatti baattee jirti.
PPn qaama biraatiin baandaa jechuu hin dnadeessu.
ABO yoo ta’e, malalttoo fi amqaa ittiin beekamu qaba. ABOn dantaa Oromoo tiksuun beekama; ABOn faayidaa Oromoo eegsisuuf dhaababte. Kananais beekama. ABOn baandummaan ibsuuf yaaluun bifa kamiinuu fudhatama hin qabu; dhaaba ABOs ta’ee, hoggantootni ABO, miseensota ABOs ta’ee, deeggartoota, maqaa badaa kanaan faaluuf yaaluun gatii hin qabu; hin danda’amus. Isaan kunneen faajjii bilisummaa ti; mallattoo bilisummaa ti; mallattoo walabummaa ti; mallattoo birmdadummaa ti!
Muluu Baqqalaa ‘Allati Barisi ‘ New Oromo Music Video 2020
የምርጫውን መራዘም አስመልክቶ
ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የ”ባንዳ” ክስ የሰጡት ምላሽ
Dubbiin hayyoota Oromoo fuula gurraachesse kun dubbii jabaadha.